ललितपुर । नख्खु कारागारमा मनोसामाजिक अस्पताल बनेको छ । भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले केही महिनापछि नै अस्पताल सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ । यो अस्पताल कारागारमा सञ्चालित पहिलो मनोसामाजिक
क्षयरोग पत्ता लगाउन अत्याधुनिक यन्त्र
कञ्चनपुर । राष्ट्रिय क्षयरोग निवारण केन्द्रले सदरमुकाम भीमदत्तनगरस्थित महाकाली अञ्चल अस्पताललाई क्षयरोग पत्ता लगाउन अत्याधुनिक जिन एक्सपोर्ट मेशिन शनिबार उपलब्ध गराएको छ । अत्याधुनिक यन्त्र नहुँदा अस्पतालले क्याट एक र
आज ६५ औं विश्व कुष्ठरोग दिवस
काठमाडौं । सन १९५४ देखि प्रत्येक वर्ष जनवरी महिनाको अन्तिम आइतबारका दिन पर्ने विश्व कुष्ठरोग दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । भारतीय अहिंसावादी नेता महात्मगान्धीको मृत्यु भएको
भारतको पद्मश्री पुरस्कारबाट सम्मानित भए नेपाली डा. सन्दुक रुईत
काठमाडाैं । भारतको प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कारद्वारा नेपाली आँखा चिकित्सक डा. सन्दुक रुइत सम्मानित हुने भएका छन् । गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा विहीबार राति विभिन्न पुरस्कारहरूको घोषणा गर्ने क्रममा भारत सरकारले यस्तो
खाद्यान्न गुणस्तर परीक्षण तयारीमा खाद्य संस्थान
काठमाडौं । नेपाल खाद्य संस्थानले खाद्यान्नको गुणस्तर परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । खाद्यान्नको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने कार्य अघि बढाइसकेको संस्थानको योजना विभागका प्रमुख एवं प्रवक्ता
जाजरकोट र बाजुराकाे मौसमी रुघाखोकीमा हङकङ फ्लु
काठमाडौं । जाजरकोट बाजुरालगायत जिल्लामा फैलिएको मौसमी रुघाखोकीमा हङकङ फ्लु (एच३एन२) मा पुष्टि भएको छ । हङकङ फ्लु भाइरस इन्फ्लुएन्जा ‘ए’ उप–प्रजातिको एच३एन२ नामले चिनिन्छ । प्रभावित जिल्लाका बिरामीको थ्रोट स्वाब
भाइरलबाट ३ को मृत्यु, नियन्त्रण गर्न विशेष टोली परिचालन
कालिकोट । खाँडाचक्र नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ४ मा फैलिएको भाइरल ज्वरोले महामारीको रुप लिएको छ । भाइरलले अहिलेसम्म ३ जनाको मृत्यु भएको छ । वडा नम्बर २ को
अञ्चल अस्पतालको सेवा प्रभावित
धनगढी । स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सिङ कर्मचारीले आफ्ना मागको सुनुवाइ हुनुपर्ने मागसहित काम गर्न बन्द गरेपछि सेती अञ्चल अस्पताल धनगढीको उपचार सेवा प्रभावित भएको छ । विगत चार दिनदेखि नर्सिङ
स्वस्थ छन् ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी ओली तन्दुरुस्त भएका छन् । स्वास्थ्य परीक्षणमा सबै रिर्पोट ठीक रहेको पाइएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् । बैंककको बुमरुमगाड अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिहेका
एजेन्सी । मानिसलाई आफ्नो उमेर ढल्कँदै गएपछि सुन्दरता बिग्रन्छ कि भन्ने ठूलो चिन्ता हुन्छ । अझ सन्तानको आमा भएपछि सुन्दरता बिग्रने चिन्ताले महिला बढी पिरोलिन्छन् । तर सन्तान जन्माएर पनि